आकाशवाणी (Aakashwani): तपाईंको ठाउँको पुरानो नाम के हो ?
शुरुमै प्रस्टीकरण दिन्छु; आफु खिस्टियन होइन र मुस्लिम पनि होइन । त्यसैले त्यो धर्मावलम्बीलाई गाली गर्ने मेरो कुनै अधिकार छैन र चासो पनि छैन । जन्म दिने बुवा-आमा तथा शाखा-सन्तान सबै हिन्दू भएकोले हिन्दूको राम्रा र नराम्रा कुराको बारेमा बढी नै चासो लाग्छ । हिन्दूहरुलाई गाली नगरौं भन्छु तर गाली गर्नु पर्ने स्थिती पैदा भइहाल्दो रहेछ ! के गर्ने, 'आदत से मजबुर' !
कुरा के भो भने, हिजोको कुराकानीको सिलसिलामा बिराटनगरमा जन्मे-हुर्केका भाई अशोक राजबंशीले भने -"हाम्रो ठाउँको पुरानो नाम 'गोग्राहा' हो, धेरै पछी मात्र त्यसलाई बिराट राजासँगको नामजोडेर बिराटनगर भन्न थालीएको हो ।"
'ए हो र?' भने, कुरा सकियो ।
पछी मनमा कुरा खेल्दै आयो, मेरो जन्म-ठाउँको पुरानो नाम पनि त परिवर्तन गरिएको हो नि ! त्यस्को पुरानो नाम 'पाराखोपी गाविस' थियो । तर महाभारतका पात्र अर्जुनले आफ्ना गाईहरुलाई पानी खुवाउन वाण हानेर पानी निकालेको ठाउँ भनेर केही तागाधारीहरुको अगुवाइमा पुरानो नाम हटाएर 'अर्जुनधारा' गाबिस बनाइएछ (हाल शनी-अर्जुन नगरपालिका, झापा)! जबकी जानकारहरु अर्जुनले वाण हानेर पानी निकालेको भन्ने कुनै तथ्यगत आधार छैन भन्छन् । त्यहाँ पहिला कुनै पोखरी थिएन । वाण हानिएको भन्ने ठाउँ त्यसै पनि अन्य ठाउँको तुलनामा गहिरो भएर जरुवा पानी निस्किएको हो ।
हुन त हाल त्यो ठाउँले राम्रो पर्यटकीय सम्भावना ल्याउने छाँट देखाउँदैछ । एक मानेमा यस्को नाम परिवर्तन गरिएको सार्थक देखिएको पनि छ । तर पक्कै पनि पाराखोपी नाममा पनि केही न केही ईतिहास त छिपेको थियो होला नि । यदी पाराखोपी पनि पछी बदलिएको नाम हो भने जस्ले बदलेको भए पनि किन बदलियो ? सामान्य फाइदाको लागि हिन्दूकरण वा गैह्रहिन्दूकरण गर्ने मनसाय सहित अनेक किसीमका कथा-कुथुंग्री जोड्दै कुनै पनि ठाउँको एेतीहासिकता र पहिचान मासीदिनु त भएन नि ! कि कसो ?
उदाहरणको लागि भारत तिर हेर्ने हो भने त्यहाँ हाल आएर भटाभट पुरानो नाम राखीदैछ । जस्तो बम्बैलाई पुरानो नाम मुम्बई, क्यालकटालाई कोलकता, मड्रासलाई चेन्नैइ आदी ।
कुनै पनि ठाउँको नामले त्यो ठाउँको ईतिहासलाई जिउँदो राख्छ । भारतको शहर मैसुर कुनै कालखन्डमा राजा महिशासुरको राज्य थियो । महिश+असुर बाट मैसुर भएको भन्ने विद्वानहरुको मत छ । पुराणमा उल्लेख गरे अनुसार महिशासुरलाई देवी दुर्गाले बध गरेकी हुन् । तापनी उस्को राज्यको नाम परिवर्तन गरिएन ।जसबाट त्यस्को एेतीहासिकता हजारौं साल पछी पनि जिवितै राख्नलाई सम्भव भएको छ ।
हामीकहाँ चै किन सबै किसिमका नामलाई बलात हिन्दूकरण गर्नु पर्‍यो ? त्यस्तो नगर्दा हुन्न ?
*नोट : यदी तपाईंको पनि ठाउँको पुरानो नाम परिवर्तन गरिएको छ भने कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला । ताकी भोली कुनै कालमा त्यस्को असली नाम संग्रह गर्न सकियोस् ।
अर्जुनधाराको फोटो सौजन्य : सिद्धार्थ नबिन उप्रेती
Labels: Arjundhara, Biratnagar, Note, Old name
Digital Painting (Imaginary Landscape)
साकुरा फुलेपछी ! (Blooming Sakura)
मेरो कथा (MyStory) 2D Animation Video